CO₂ Laser for Fashion sy Clothing Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
CO₂ Laser for Fashion sy fitafiana Indostria
CO₂ Laser NY FITAFIANA
Laser Golden constructs CO₂ tamin'ny laser milina tsy manambady noho ny fanapahanao mivezivezy eny, mivatra sy plaid lamba, lamba vita printy ary indrindra fa ho an'ny fomba amam-panao mba fitoriana natao tokana.
Avo mahomby MTM (natao-to-fepetra) amin'ny fanapahana tamin'ny laser rafitra manan-tsaina.
Mission: Fahaizan'ny Trondro / Material fahavaratra / Sendikà fahavaratra / Zero lisitra / tsaina
Laser nandidy sy sokitra in Clothing Indostria
Noho ny fitomboan'ny lazan'ny lamba, lamaody ary fitafiana orinasa dia mivoatra haingana. Ary dia lasa tsara kokoa ho an'ny orinasa toy ny dingana fanapahana sy ny sokitra. Synthetic ary koa ny fitaovana voajanahary izao matetika no tapaka sy sarin-javatra amin'ny tamin'ny laser rafitra . Avy ba nataony lamba, harato lamba, lasitike lamba, manjaitra lamba ho nonwovens sy felts, ankamaroan'ny karazana lamba tamin'ny laser dia mety ho ampiasaina.
Nentim-paharazana fanjairana Vs. Laser Cutting
Ao amin'ny mahazatra fanjairana, fanapahana boky no tena be mpampiasa, nanaraka ny mekanika fanapahana. Samy fomba fanodinana ireo dia ampiharina amin'ny avo-boky asa fanapahana, sady niteti marina dia tsy avo. Laser fanapahana milina dia mety ho kely-boky, akanjo isan-karazany multi-fanjairana, indrindra fa ho an'ny fifadian-kanina sy ny fanao akanjo lamaody.
Fanapahana boky fampianarana nentim-paharazana manana fangatahana avo ny fomba sy ny burrs cutter rehefa nanapaka. Laser fanapahana manana avo mandeha ho azy tsy tapaka sy ny amoron'ny famehezana.
Ankoatra izany, dia manome CAD famolavolana, AUTO fanamarihana toerana, mandeha ho azy mitontongana, mandeha ho azy miaraka amin'ny sary digitizer rindrambaiko tamin'ny laser fanapahana mba hahazoana mandeha ho azy fanodinana.
Nahoana no mifidy ny fomba amam-panao tamin'ny laser fitafiana?
Laser Golden constructs tamin'ny laser vahaolana ny customization manokana fa nanan-tarehy sy akanjo orinasa.
Ampitahaina amin'ny fitaovana fanapahana, ny fanapahana tamin'ny laser dia manana ny tombony ny avo fametrahana mazava tsara, tsy consumables, madio notapatapahina sisiny, ary mandeha ho azy sisiny voaisy tombo-kase.
Automatic akany, mandeha ho azy sakafo sy ny fanapahana tamin'ny laser mitohy, mifanaraka amin'ny famokarana sy ny santionany bahoaka, asa mamonjy ny boky fampianarana sy ny fomba fanaovana miparitaka.
Ampiasao matihanina akany rindrambaiko hampitombo zavatra utilisation farafahakeliny 7%. Ny aotra elanelana eo amin'ny lamina mety ho mpiara-sisin'ny tapaka.
Professional rindrambaiko fonosana, mora ny hahazoana fomba planina, fanamarihana toerana fanaovana, sary digitizer sy mitontongana. Pattern antontan-kevitra dia mora ny fitantanana amin'ny PC.
Lavaka (perforating), ravin, hollowing, sokitra, obtuse lafiny manapaka, Ultra-ela endrika fanodinana, tamin'ny laser milina afaka handamina misy tsipiriany tsara.
Isika dia manolo-tena manampy anao hanana ny famokarana sy vaovao farany mora kokoa sy tsara kokoa miaraka amin'ny samihafa tamin'ny laser rafitra.
Ny CO 2lasers no mety tsara noho ny fanapahana sy ny sokitra isan-karazany ny lamba sy ny lamba.
Laser amin'ny Golden ny CO 2tamin'ny laser milina ho an'ny akanjo lamaody sy ny orinasa, afa-tsy mivezivezy eny lamba azo tamin'ny laser manapaka haingana sy mahomby, ary koa ny sarin-javatra sy perforated tamin'ny fy hakodian'ny olona ny horonam-boky. Koa hahazo-bokatra bebe kokoa amin'ny tamin'ny laser fa tsy tamin'ny antsy.
Araraoty ny Golden Laser ny CO 2 tamin'ny laser milina, mba ho mpitarika eo amin'ny tsena.
CO 2flatbed tamin'ny laser fanapahana milina amin'ny conveyor
Galvo tamin'ny laser horonan-taratasy ny manakodiava fanapahana sy ny sokitra milina
CO 2 tamin'ny laser cutter ho an'ny plaids sy ny ravin lamba
Vision tamin'ny laser cutter ho lamba vita pirinty
Laser fanapahana milina maty ho an'ny hisainana taratasy mandraikitena
Inona no lamba dia mety ho CO2 tamin'ny laser fanodinana?
Polyester, Aramid, Kevlar, volon'ondry, landihazo, Polypropylene, Polyurethane, Fiberglass, Spacer lamba, Nahatsiaro, Silk, Filter volon'ondry, ara-teknika lamba, synthetic lamba, sombin-javatra, volon'ondry, Velcro fitaovana, ba nataony lamba, harato lamba, Plush, Polyamide, sns .
Tsy fahazoan-dalana tamin'ny laser ireto manaraka ireto milina
ho an'ny akanjo lamaody sy ny orinasa
Laser Golden ny CO2 tamin'ny laser milina dia mety tsara noho ny fanapahana sy ny sokitra lamba amin'ny fametrahana mazava tsara sy ny manovaova amin'ny famokarana.
Hafainganam-pandeha avo tamin'ny laser fanapahana akanjo sy lamba amin'ny conveyor Auto-feeder. Double Y-mpiray rafitra. 80 Watts ~ 150 Watts
Galvo Laser nanapaka sy Perforating Machine
Ny zavatra maro tamin'ny laser milina, izay mahay manao na fanapahana sy perforating ho an'ny jerseys, polyester, microfiber, dia manainga lamba.
Laser Cutter amin'ny Camera
Mitohy sakafo, sy ny fankasitrahana Auto-nanapaka tamin'ny laser pirinty lamba ary fitafiana marika. Scan faritra 1500mm × 900mm